(Daawo) Prof Peter Kagwanja “ Waxan u shaqeeyay Kheyre, xafiiskiisa ayan mushaar ka qaadan jiray" - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
Home Wararka (Daawo) Prof Peter Kagwanja “ Waxan u shaqeeyay Kheyre, xafiiskiisa ayan mushaar...
(Daawo) Prof Peter Kagwanja “ Waxan u shaqeeyay Kheyre, xafiiskiisa ayan mushaar ka qaadan jiray”
Prof Peter Kagwanja oo ah ninka qabo Wasiirka Difaaca dalka Kenya Marwa Munica Juma ayaa waraysi uu siiyay taleefishinka National TV ka cadeeyay in uu mushaar ka qaadan jiray xafiiska Ra’iisal Wasaarahii hore ee Soomaaliya Xasan Kheyre.
Prof Peter Kagwanja oo ah nin lagu sheego in uu yahay shaqsi ku mayal adag dareenkiisa kuwajan dacwada u dhaxeeysa labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, ayaa waxa nasiib xumo ah in mushaar laga siin jiray xafiiska Ra’iisal Wasaarsaha Soomaaliya.
Dhanka kale Prof Peter Kagwanja ayaa waxa uu qoraalo lagu amaanayo Xasan Kheyre ku soo qori jiray Wargeeysyada ka soo baxa dalka Keny, isaga oo wakiil ka ah Xasan Kheyre. Sida MOL ku heshay cadeymo cad, lacagaha la siiyo Prof Peter Kagwanja ayaa waxa la soo marin jiray Xildhibaan Mustaf Dhuxuloow oo ahaa xiriiriyaha u dhaxeeyay Kheyre iyo Prof Peter Kagwanja.
Sida MOL loo xaqiijiyay Prof Peter Kagwanja ayaa waxa hadda si buuxda u shaqaaleeyay Xasan Kheyre si uu ugula shaqeeyo olala doorashadiisa. Iibinta laga iibinayo Xasan Kheyre dalka Kenya ayaa waxa aas-aas u ah in dacwada badda ee u dhaxeeysa labada dal. Prof Peter Kagwanja ayaa sheegay in dacwda badda lagu soo afjari diino si isfaham ah.
Waxa xaqiiqdii wax laga xumaado ah in cashuurtii shacabka Soomaaliyeed laga soo ururiyay in mushaar laga siiyo shaqsi qayb ka ah xaraashka Kheyraadka dalka Soomaaliya isaga oo difaacaya danaha dalkiisa, kana soo horjeedo danaha umadda Soomaaliyeed.
Waxa waajib ku ah xeerilaalinta Soomaaliya, waaba hadii ay dareen Soomaalinimo ku jiro, in ay maxkamad soo taagaan Xasan Kheyre. Sidoo kale waxa muhim ah baarlamanka Soomaaliya uu soo saaro baaq lagu maxkamadaynayo Xasan Kheyre.
Halkaan ka daawo hadalkii Prof Peter Kagwanja
Previous article(Akhriso) Xarunta NEOC ee uu Kheyre xariga ka jaray, ayaa mar labaad waxaa Dhagax Dhigay Rooble!
Next articleQarax Ka Dhacay Inta U Dhaxeysa Magaalada Muqdisho Iyo Afgooye